Earth Wind Map, a hypnotic na mmekọrịta ihu igwe map | Netwọk Mgbasa Ozi
Earth Wind Map, a hypnotic na mmekọrịta weather map
David melguizo | | Meteorology, Amụma
Foto e nwetara site na Earth Wind Map
Ngwa kọmputa ọhụrụ, Earth Wind Map, nke a na-ahụ na ịntanetị ma dịịrị ndị ọrụ niile, na-enye anyị ohere ileba anya na ụzọ mara mma, nke mara mma na, kedu nke dị mkpa, data emelitere na mmiri ifufe na-eme na n'ofe uwa.
Ọrụ US National Global Weather Forecast Service (GFS) bụ ọrụ maka ịdebe ihu igwe. Oge na ụwa. Ọ bụ ebe nchekwa dị oke ọnụ ahịa nke ozi, mana data ya, egosiri na eserese Day-egbukepụ egbukepụ nke sitere na onu ogugu, ha abughi uzo kacha mfe iji lee anya n'ile ha anya n'enweghi akara ugo mmụta ihu igwe.
Nke a bụ ebe Earth Wind Map nwere ike inyere aka. Onye a na - ewe data site na GFS na - emelite ya kwa awa 3 ma nyefee ya na maapụ di omimi. Nsonaazụ bụ ihe ngosi anya na ịma mma nke ebili mmiri A na-emepụta ihe na mbara ala n'oge ọ bụla.
Gịnị bụ Earth Wind Map?
Cameron Beccario, onye injinia ihe omume GFS, emeela ụwa na-agbanwe ma na-ebuli elu nke na-enye echiche nke ọnọdụ ihu igwe buru amụma maka ụwa. A na-emelite ya kwa awa atọ ọ bụla ekele maka a nnukwu ngwanrọ. Nke a nnọchiteanya (Map ala ikuku) O nwere ike inyere anyị aka ịkọwa oge dị mfe karị na anya. Enwere ike ịchọta nkwenye siri ike na data nduzi n'otu oge.
Dị ka eserese ikuku akọwapụtara nke US nke Fernanda Viégas na Martin Wattenberg mepụtara na mbido afọ gara aga, Earth Wind Map bụ mmekọrịta. Site na ịpị ụwa na ịdọrọ, map ahụ ga-agbagharị na axis ya ma mgbe sekọnd ole na ole data ga-apụta ìhè n'ụdị usoro meandering.
A ga-anọchi anya ikuku dị nro dị ka eriri dị iche iche nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ifufe siri ike ga-anọchi anya site na ahịrị na-acha odo odo, ebe ike dị ike ga-anọchi uhie.
Iji tọọ ma ọ bụ bugharia ụwa anyị ga-pịa na òké n'otu oge na-enweghị ịhapụ bọtịnụ ahụ, gaa na ntụziaka anyị chọrọ tilt ma ọ bụ bugharia ya. Iji mbugharị, ị ga-enwe pịa abụọ na isi ihe ị chọrọ mbugharị.
Na nkenke, anyị na-ekwu maka ngwa ọrụ zuru oke, ebe ọ na-eji data ọnụọgụ sitere na isi mmalite nke ozi ihu igwe, emelitere kwa awa atọ, na-ebute ụzọ ọhụụ nke na-egosighi naanị data zuru ụwa ọnụ kamakwa asusu.
Ngwá ọrụ a, nke a na-apụghị ichetụ n'echiche afọ ole na ole gara aga, bụ otu enyemaka ọzọ ịmara na ịkọwa ozi gbasara ihu igwe, ọkachasị maka ndị ọkacha mmasị na-ahụghị sayensị sayensị a anya.
Ozi ndi ozo: Infographic gosipụtara afọ iri isii nke oke ifufe na United States, Anticyclone dị ka igwe igwe ojii, Ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa nke e detụworo n’ụwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Earth Wind Map, a hypnotic na mmekọrịta weather map
Luminescences na ala ọma jijiji, Rift zones na ịdọ aka ná ntị oge mbụ
Mmiri ozuzo nke udu mmiri na ugwu ugwu, gini kpatara ya ji na-akawanye njọ?